Isreebreebka Yurub ee koobka adduunka 2022 ayaa si xamaasad leh uga socda garoomada Yurub… – Hagaag.com
Isreebreebka Yurub ee koobka adduunka 2022 ayaa si xamaasad leh uga socda garoomada Yurub…
Posted on 26 Maarso 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Xulka qaranka kubada cagta Isbaanishka ayaa barbaro la galay 1-1 kooxda Griiga maalintii Khamiista, bilowga safarka labada kooxood ee group-ka labaad ee isreebreebka Yurub ee koobka adduunka 2022, halka xulka Swedn uu 1-0 kaga badiyey kooxda Georgia.
Sidaa darteed, xulka qaranka Sweden ayaa goor hore hogaanka guruubka 3 dhibcood ku qabtay iyagoo laba dhibcood ay ka sareeyaan dhigooda Spain iyo Griiga.
Xulka qaranka Spain ayaa qaybtii hore ee ciyaarta ku soo gabagabeeyay gool uu u dhaliyay Alvaro Morata daqiiqadii 32-aad, xilli ay kooxda si buuxda gacanta ugu haysay ciyaarta.
In kasta oo ay Isbaanishka lahaayeen gacanta sare qeybtii labaad ee ciyaarta, haddana isku dayo dhab ah ayaa ka maqnaa goolka Griiga, kooxda Griigga ayaa uga jawaabtay goolka barbaraha oo uu u dhaliyay Tassos Paksitas oo rigoore ahaa daqiiqaddii 57-aad.
Ciyaartii labaad ee guruubkaan, xulka qaranka Sweden wuxuu kaga adkaaday dhigooda Georgia gool nadiif ah, kaasoo uu u dhaliyay Victor Clayson daqiiqadii 35-aad.
Ciyaarta ayaa waxay markhaati ka ahayd ka qeybgalkii ugu horreeyay ee halyeeyga weerarka Zlatan Ibrahimovic (39 sano) ku dhowaad 5 sano kadib, iyadoo ciyaaryahanka uu ku soo laabtay kooxda isagoo ciyaaray kulankan.
Ibrahimovic ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah sanadkii 2016, ka dib markii uu uga qeyb galay Sweden koobkii qaramada Yurub ee ka dhacay France, laakiin hadda ayuu ku soo laabtay kooxda.
Si ka duwan dhiggeeda Isbaanishka, xulka qaranka Jarmalka ayaa guul ku bilaabay bilowgii isreebreebka Yurub ee Koobka Adduunka 2022, iyadoo guul raaxo leh 3-0 ay ka gaareen naadiga Iceland wareegii koowaad ee kulamada guruubka 10aad..
Xulka qaranka Jarmalka ayaa si xoogan ku bilaabay ciyaarta waxayna ku soo baxeen laba gool oo xilli hore la dhaliyey oo ay kala dhaliyeen Leon Goritska iyo Kai Havertz daqiiqadihii saddexaad iyo toddobaad, ka dibna Ilkay Gundogan ayaa goolka saddexaad ku daray daqiiqadii 56aad.
Ciyaar kale oo ka tirsan isreebreebka Koobka Adduunka Yurub, kooxda Talyaaniga ayaa waxay bilaabeen ololahooda iyagoo ka adkaaday kooxda North Ireland oo ay uga badiyeen 2-0 wareega koowaad ee group-ka saddexaad.
Domenico Berardi iyo Cero Immobile ayaa goolal u dhaliyay xulka qaranka Talyaaniga daqiiqadihii 14 iyo 38.
Guushaan ayaa kooxda Talyaaniga, oo seegtay tartankii ciyaaraha adduunka 2018 ee Russia, ayaa heshay seddexdii dhibcood ee ugu horreysay guruubka, si ay ugu dhammeysato kaalinta labaad farqiga goolasha ee Switzerland, oo horaantii Khamiista 3-1 uga badiyay Bulgaria.
Kooxda kubbadda cagta ee England ayaa soo bandhigtay ciilkeeda iyadoo guul weyn ka gaartay San Marino 5-0 furitaankii labada koox ee gruubka sagaalaad ee isreebreebka Yurub ee Koobka Adduunka.
Garoonka Wembley ee qadiimiga ah caasimada Ingiriiska London ayaa kooxda England waxay soo bandhigeen awoodooda waxayna go’aansadeen soo gebegebeynta ciyaarta gebi ahaanba qeybtii hore iyadoo 3 gool ay kala dhaliyeen James Ward, Dominic Calvert Lewin iyo Raheem Sterling daqiiqadahii 14, 21 iyo 31 .
Qeybtii labaad, Lewin ayaa ku daray goolkiisii ​​labaad iyo kan afraad ee kooxda daqiiqadii 53aad, ka hor inta Oli Watkins uusan ku dhameystirin goolka shanaad daqiiqadii 83aad.
England ayaa ku hogaamineysa group-ka goor hore farqiga goolasha ee kooxda Albania.